Sida mid ka mid ah weel video dhawaan abuuray, MP4 dhacdo in video weelka ugu horeysay si rasmi ah loo qeexaa oo ay MPEG-4 Standard. Tani waxay mid aad looga texgeliyo, sidaas jidaynayey isticmaala in la isu geeyo durdurrada multimedia kala duwan file a video cidla ah. Video geeyo waxaa sidoo kale suuragal ka dhigay, oo ay la socoto helitaanka bedeley DVD qoraalka.
Baahida loo qabo in encode files MP4 baxdo marka ururada ama dadka isticmaala rabto inaad geliyaan videos on wadaago portals jidaynayey qalabka kala duwan u ciyaaro file in. MP4, isagoo mid ka mid ah qaabab loogu isticmaalo caawiye audio iyo video in la mideeyo dhowr files multimedia qaab hal dhamaystiran.
Encoder MP4 waa barnaamij software in ey video files ka qaabab dhowr galay MP4, sidaas samaynta faylka la jaan qaada ciyaartoyda MP4 badan oo sida iPhone, PSP, Madaxweyne Siilaanyo 360, iyo kuwo kale ah. Waayo, kuwa raadinaya in ay ka bedel files MP4 ay, encoder MP4 ah ku yimaado anfacaya. Iyada oo ah qaab encoder wanaagsan, MP4 Deji file si fudud loo gaadhi karo.
Part1: Top 5 Encoders MP4 for Windows
Part2: Top 5 Encoders MP4 for MAC
Part3: Download Free Videos la Wondershare AllMyTube
Developer: AviDemux la qoray ka xoq ah, iyadoo la isticmaalayo code dadka iyo mashaariic kale. Ma isagoo Encoder MP4 hore-dhamaadka, AviDemux waa codsi standalone iyo ku dhawaad ​​is ku jira. Marka laga reebo maktabadaha in markab la AviDemux, ma jiraan xiran. Horumarinta Major ee AviDemux waxaa sameeya Grunster halka dhawaynta jaamaha, turjumaadaha, iyo wararka cayayaanka.
Qalabaynta ah hawlaha la samayn karaa iyadoo la isticmaalayo safka shaqada, mashaariicda, iyo awoodaha kale ee awood badan
Ayaa encoder a xusay muddo dheer suuqa ugu jirta
Developer: kale encoder is-jira, waa x264, x265, frontend NeroAAC is-jira oo loo adeegsado soo saara encodings kama dambaysta ah ee alaabta video. Uu awood u leeyahay in ay la tacaalaan AviSynth qabnay, video / audio aan riixo, iyo video Tifaftirayaasha la codecs caadiga ah. Markii hore shaqeeyay dul Syurara Gundan, waxa uu u adeegsanayaa credits iyo tixraacyo horumarinta iyo ururo badan oo.
Taageerada wax ku oolka ah koodh caalamiga
Raaxo ee User Interface nadiif ah
Processing File Dufcaddii la safka hawsha
Sidoo kale taageertaa 10-yara video Deji
Habka Deji waxaa joojin karo iyo taageero dhamaystiran jaridda oo dhan
Ma u baahan tahay rakibaadda iyo luqado badan oo la heli karaa
Developer: soo diyaariyay DivX shaybaadhka, encoder taas loo ogolaado in aad encode HEVC durdurro in waxa uu ka kooban gudahood Profile DivX ah. Kadib markii uu dhamaystay habka Deji ah, mid ka ciyaari kara video isticmaalaya MKV Tool, kaas oo la karkaray u HEVC ama doorato version ugu dambeeyey ee MKV Tool. DivX 10 ciyaaryahan waxaa loo isticmaali karaa inuu u ciyaaro faylasha encoded on your computer.
Kuu ogolaanayaa inaad encode durdurrada HEVC / H.265 kuwa gudaha DivX HEVC Profile.
Waa software line amarka ah
Taageerada scalability ku meel gaadh ah ee DivX HEVC
Everton iyo taageero u Windows 8 iyo 10, waxaa jira Linux Version aad
Hagaajiyey ee xawaaraha Deji iyo hufnaan
Developer: Created by Dan Cunningham, EncodeHD waa codsi ah in dib-u-encode dhammaan noocyada video files isticmaalka on your ciyaaryahan warbaahinta gudaha ama qalabka durugsan. Waxay leedahay interface fudud oo la yareeyo dhibaatooyinka, iyo iyada oo aan aad loo oggolaado hoos tayada, waxaa imparts xawaaraha ugu badan. Waxa ay taageertaa tiro balaadhan oo ah qalabka wax soo saarka waxa ka mid ah video ah encoders ugu Windows Operating System doondooneen samaynta.
Isticmaala ah qalab yar il furan.
Miyuu interface aad u wanaagsan, waxtar u leh kuwa baranaya oo
Tiro balaadhan oo ah qaabab ay taageerayaan, oo daboolaya qalabka guriga iyo durugsan.
Waxaa loo baahan 2.0 Qodobadda NET.
Developer: barnaamij u furan-il software ah, waxaa dhacdo in heerka warshadaha ah ee video riixo. Sidoo kale loo yaqaan MPEG-4 Qaybta 10, waa bedeli heerarka hore, kuwaas oo MPEG-2 iyo MPEG-4. Waxaa sida caadiga ah loo isticmaalo marka files yihiin in la encoded u ah wax soo saarka video-qeexidda sare. Heerarka AVC for Advanced Video sireed, oo waa inay isku H.264.
Waxay ka faa'idaysanaysaa chips-xawaaraha sare, iyo koriyo saarka tayo leh size jir, taas oo ah afar jeer ka weyn
Baahan yahay saddex-meelood meel ka mid ah bandwidth asalka.
Kuweeda oo ey la soo saarka la size badhkiis.
Wuxuu ka caawiyaa in gubanaya filimada HD gal DVD ah caadiga ah
Waxaa loo isticmaalaa in shaandhaynta fudud, Deji, iyo hawlaha diinta.
Qalabaynta ah hawlaha la samayn karaa iyadoo la isticmaalayo safka shaqada, mashaariicda, iyo awoodaha kale ee awoodda badan.
Taageerada tiro balaadhan oo ah qaabab video.
Developer: barnaamij kale oo u furan-il software, ee ay soo kooxda gacan-jabis, encoder tani waxay bixisaa fursad u encode file video ka qaab kasta oo la siiyey in ay qaab la doonayo. A encoder multi-madal, waa ku ool ah, oo si joogto ah casriyaynta in la baabi'iyo cayayaanka, iyo sharooto. Waxa kale oo ay ugu yeedhi isticmaala inay ka qayb qaataan waxa fiican samaynta, sidaas waa mid ka mid ah encoders ugu isticmaalo MAC Operating System samaynta.
Tiro ka mid ah presets qalab dhisay-
Waxaa jira tiro fara badan oo ilo aqbasho taageeray
Safka kor u baaq badan
Xulashada of live video Falanqeynta
Tayada Constant ama isku celceliska Deji qayb-rate
Developer: Created by Video LAN Organization, oo ka kooban shakhsiyaad iyo xirfadlayaasha xal warbaahinta si fiican u isticmaala dunida dacaladeeda hawgal aan faa'iido doon ah. Sii daayay hoos shuruudaha GNPU GPL, waxa ay leedahay ah user gaari ballaaran marka ay timaaddo Operating System MAC ah. Iyadoo meelaynta B-jir qabsiga, waxaa sidoo kale la heli karo ee matrices quantization caadadii.
Best in waxqabadka fasalka, riixo, iyo muuqaalada
Encode karaa wax ka badan 4 1080p durdurrada in waqtiga dhabta ah.
Ku soo optimizations psychovisual ugu horumarsan
Features codsiyada kala duwan oo faa'iido leh oo ay taageerayaan
U isticmaala in ay xarumo warbaahineed telefishanka iyo abuuray ee portals badan oo online.
Download Encoder x264
Developer: encoder la siiyay waxaa gaar ahaan loogu talagalay MAC OS X leh interface wanaajiyey graphic user oo shaqeyn karaan in ka badan 20 xoog badan Unix Open Source Video iyo Audio Processing Tools in ka mid ah 'ffmpeg', oo waa 'video degdeg ah hyper iyo encoder audio' , 'mpeg2enc', kaas oo u furan-il mpeg-2 encoder iyo multiplexer, iyo ugu dambayntii, ee 'mencoder', oo waa mpeg-4 encoder.
Rid iyo doorasho jiita ka dhigaysa Deji deg deg ah
Reads ka tiro balaadhan oo ah qaabab aqbasho
Output ahbaa waa qaabab dhowr ah oo la jaan qaada qalabka kala duwan
DVDs iyo subtitles abuurtaa aad la fursadaha kale ee ku teedsan
5. Harper Encoder u MAC
Developer: kale codsiga Graphic interface User u mencoder, MP4 Harper Encoder waxaa loo isticmaalaa in encode kasta qaab video in MP4. Gui waxay leedahay muuqashadii weeraryahan si Encoder PMP 'muxer' hab u iPod, iPhone, Apple TV, iyo PSP mooyee. Waa barnaamij software furan-il iyo leedahay saldhig user ballaaran ka mid ah dadka isticmaala MAC Operating System.
Si hufan xawaaraha diinta
Wuu ka aqbasho ka tiro badan oo ah qaabab
Output ahbaa si ay u taageeraan tiro ka mid ah qalabka
Encode karaa ku dhawaad ​​qaab video kasta
> Resource > MP4 > Sida loo Encode MP4 Faylal ay la Encoder MP4 ah